PressReader - Isolezwe: 2018-02-14 - Othisha mabayeke umkhuba wokufundisa ngenduku
Othisha mabayeke umkhuba wokufundisa ngenduku
Innocent Meyiwa (UMKHULUMELI WESIZWE SAKAMEYIWA) EMALANGENI MHLELI: Ngiphatheka kabi kakhulu njengomzali uma ngibona isihluku esingaka esenziwa abanye othisha abashaya izingane. Ngesikhathi sikhula isikole bekuyindawo lapho umntwana ekhululeka khona futhi yilapho echitha khona isikhathi esinigi.
Indlela osekwenzeka ngayo iyasishaqisa impela. Sikhule induku kuyiyona ndlela yokuqondisa ngesikhathi sakudala kepha umthetho waseNingizimu Afrika sewayivala indaba yokushaywa kwabafundi ezikoleni. Pho kwakhala nyonini ezikoleni ezisaqhubeka nalo mkhuba?
Okokuqala ukusetshenziswa kwenduku kwenza abafundi bavilaphele ukuya esikoleni okusho ukuthi labo bafundi ngeke baphumelele. Kuye kuthiwe imfundo iwukhiye wempumelelo yakho, pho sizwe sini esisikhulisayo uma sixosha abafundi ngenduku?
Kuyangijabulisa ukuzwa iNhloko yoMnyango wezeMfundo KwaZulu-Natal, uDkt Enoch Nzama, ithi bazophindela ezikoleni bayophenya ngenhloso yokuthola othisha abaqhubeka nokushaya abafundi. Siyancoma nokuthi umisiwe uthisha owabonakala ebhaxabula umfundi.
Kuyasijabulisa kakhulu thina njengomphakathi ukubona uMnyango wezeMfundo uzihlupha ngabantwana bethu. Fezile Masikane E-WARTBURG